Global Voices teny Malagasy » Ireo Hetsika ‘Maimbo Ianareo’ any Libanona · Global Voices teny Malagasy » Print
Ireo Hetsika ‘Maimbo Ianareo’ any Libanona
Voadika ny 23 Septambra 2015 5:23 GMT 1	 · Mpanoratra Sahar Habib Ghazi Nandika Tantely
Sokajy: Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Miaraka amin'ireo fako an-taoniny maro miavosa ao amin'ireo làlan'ny Beyrouth renivohitra, manatri-maso ny fihetsiketsehana lehibe indrindra tato anatin'ny tantarany vao haingana i Libanona, satria olona an'aliny no nifamory hiteny amin'ny governemantany hoe: “maimbo ianareo.”
Ny 1 Septambra, tamin-kerisetra no nanesoran'ireo herin'ny mpitandro filaminan'i Libanona ireo mpanao fihetsiketsehana miisa 30 izay niditra tao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana nitaky ny fametraham-pialàn'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana, Muhammed El-Machnouk.
Polisy Nandrara Tamin-kerisetra Ireo Mpikatroka Mafana Fo Tsy Hijanona eo Amin'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana Libane 
Telo andro tany aloha, ny 28 Aogositra, nanao hetsi-panoherana teo amin'ny Kianjan'ny Maritiora ireo lehilahy sy vehivavy ary ankizy miisa 250.000, ary nanome fetra 72 ora ho an'ny governemantany mba hitadiavana vahaolana maharitra amin'ny olan'ny fako.
GV Face: Ny Zavatra Ilainao Fantarina Momba ny Hetsi-panoherana Goavana “Maimbo Ianareo” Ao Libanona 
Omen'ny Hetsika Maimbo Ianareo 72 Ora Hamaliany Ireo Fangatahany Ny Governemanta 
Tsy tokony averina ahodina intsony ireo fako sasany. Endriny vaovao nasiam-panovàna tamin'ilay takelaka notazonina tamin'ny hetsika tao Libanona ity, nozarain'i @Beirutspring tao amin'ny Twitter
Ny niantombohan'ny olan'ny fako
Ny 17 Jolay, nobahanan'ireo mponina manodidina ny tanànan'i Naameh ny làlana mankany amin'ilay toerana fanariam-pakon'ny firenena, nanidy azy io tanteraka.
Nameno ireo toerana manodidina an'i Beyrouth sy Mont Lebanona io fanariam-pako io — efa ho ny antsasak'ireo 4 tapitrisa mponina matanjaka ao amin'ny firenena — hatramin'ny taona 1997.
Natao ho vahaolana vonjimaika fotsiny io fanariam-pako io, izay natao hanangonana fako eo amin'ny 2 tapitrisa taonina eo, eo am-pitadiavan'ny governemanta vahaolana ho an'ny fotoana maharitra. Fa tsy nety tonga mihitsy izany vahaolana izany, satria ireo mpanao politika — nozarazarain'ireo tsy fifankahazoana teo an-toerana sy tamin'ny faritra — tsy nahavita nifanaraka hoe aiza no hanariana ireo fakon'ny firenena.
Ireo fakon'i Libanona mipetraka amin'ny fomba ahitan-doza, izay manimba ny tontolo iainana. Sary avy amin'ny pejy ofisialin'ny hetsika Maimbo Ianareo.
Satria nahatratra 15 taonina ny fako ao amin'ny fanariam-pako Naameh — efa avo fito heny amin'izay novinavinaina tokony ho zakany — lasa tsy hay zakaina ho an'ireo tanàna manodidina intsony ny fofona maimbo. Nanao fanambaràna ny governemanta fa hanakatona ny fanariam-pako izy ny 17 Jolay. Efa tonga ny fotoana, kanefa mbola tsy nahita vahaolana afaka anoloana azy io ihany ireo manampahefana. Noho izany, nandray an-tànana ny raharaha ireo mponina ary nanakatona ny Naameh.
Hatramin'ny nikatonan'ny fanariam-pako, nijanona tsy nandroaka fako ihany koa ilay orinasa tena mpanangona fako, Sukleen, nilaza fa tsy mahita toerana hametrahana ireo fako izy.
Nanomboka niavosa teny amin'ireo làlan'i Libanona avy hatrany ireo tendrombohitra fako miavosa, nanery ireo olona mandeha eo akaikin'izany hanao tampin'orona.
Nanomboka niantso ny hitadiavana vahaolana maharitra amin'ilay olan'ny fako ny hetsika Maimbo Ianareo ary nahazo olona nankeny an-dalambe, fa niakatra haingana tamin'ny ambaratonga ambony ny zava-niseho, nihoatra ny fako, ary lasa nilaza olana lehibe kokoa mikasika ny kolikoly ao anatin'ny governemanta ankehitriny.
Miaritra ny tsy fahaizana mitantana i Libanona, ny fotodrafitrasa tsizarizary sy ny fahatapahan'ny herinaratra isan'andro, ary tsy nanana filoham-pirenena efa maherin'ny iray taona izay. Ny taona 2009, nohalavain'ny parliemanta hatramin'ny taona 2017 ny fetran'ny fiasàny, tsy misy fifidianana, nolazaina ho noho ny tsy fahamarinan-toeran'ny firenena no antony.
Nitambatra ho iray manodidina ny fahasosoran'ny olom-pirenena Libane amin'ny fomba fiasan'ny governemantany mandray fanapahan-kevitra irery manoloana ny resaka fanalàna ny fako ny hetsika Maimbo Ianareo
Nolavina ny hidiran'ireo minisitra roa nanandrana ho ao amin'ny toerana nanaovana ny fihetsiketshena, fa nilaza kosa ny hetsika fa ho raisina an-tànan-droa ireo mametra-pialàna.
Nampitandrina Ny Fikasan'Ny Antoko Politika Hanararaotra Ny Hetsika Ataon-dry Zareo Ny Libane Mpikatroka 
Ho fanampin'ireo olona mitondra sorabaventy politika, misy ireo sasany tonga miaraka amin'ireo hevitra vaovao mba hisintona ny fijery amin'ilay ady atao.
“Manana mofo sesika misy akoho sy tongolo gasy izahay, afaka ampidirinareo ve izahay?” – Hoy ny takelaky ny mpanao hetsi-panoherana teo ivelan'ny parliemanta. Sary nalefan'i @yasminebal tamin'ny bitsika
Mihodikodina any Amin'ny Aterineto ny Dikasarinà lahatsary ahitàna ny herisetran'ny polisy amin'ireo mpanao hetsi-panoherana tany Libanona. Mendrika daroka sy entona mandatsa-dranomaso ve ny fanaovana hetsi-panoherana ny fako miendrika tendrombohitra sy ny kolikolin'ny governemanta?
Lahatsary: Herisetran'ny Polisy Libaney Tamin'ireo Mpanao Fihetsiketsehana ‘Maimbo Ianareo’ 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/23/74620/
 Polisy Nandrara Tamin-kerisetra Ireo Mpikatroka Mafana Fo Tsy Hijanona eo Amin'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana Libane: https://mg.globalvoices.org/2015/09/04/73851/
 GV Face: Ny Zavatra Ilainao Fantarina Momba ny Hetsi-panoherana Goavana “Maimbo Ianareo” Ao Libanona: https://mg.globalvoices.org/2015/08/29/73631/
 Omen'ny Hetsika Maimbo Ianareo 72 Ora Hamaliany Ireo Fangatahany Ny Governemanta: https://mg.globalvoices.org/2015/08/30/73652/
 Afaka Miresaka Ny Fiovàn'ny Politika Momba ny Fako Ao Libanona Ve?: https://mg.globalvoices.org/2015/08/15/72840/
 Nampitandrina Ny Fikasan'Ny Antoko Politika Hanararaotra Ny Hetsika Ataon-dry Zareo Ny Libane Mpikatroka: https://mg.globalvoices.org/2015/08/25/73348/
 Fahaiza-mamorona Nentin'ny Libaney Nanohitra Ny Olan'ny Fako: https://mg.globalvoices.org/2015/08/30/73633/
 Lahatsary: Herisetran'ny Polisy Libaney Tamin'ireo Mpanao Fihetsiketsehana ‘Maimbo Ianareo’: https://mg.globalvoices.org/2015/08/30/73528/
 Mpanao Fihetsiketsehana Miatrika Ny Gidragidran'ny Polisy Misahana ny Rotaka Ao Libanona: https://mg.globalvoices.org/2015/08/24/73350/